Ukhiye Remote weBenz
Ungaluhlela kanjani ukhiye wemoto ochungechungeni F
ngomphathi ku 21-02-03
Manje uchungechunge olusha lwe-BMW F lunezinhlelo ezimbili: uhlelo lwe-CAS4 ne-FEM / BDC. Izindlela ezimbili ze-CAS4 anti-theft programming. Uhlelo lokuqhekeza uhlelo olwamukelwa yi-CAS4 eminyakeni yokuqala selusetshenzisiwe futhi lusathandwa ngamakhosi amaningi. Umakhi uqhekeka i-chip ngokusebenzisa imvamisa yokungena ngaphakathi ...
Umhlahlandlela wobuchwepheshe bokhiye bemoto
Njengenjwayelo, zonke izimoto njengamanje zisebenzisa indlela efanayo yokuqala-ukuvula ukunikezwa kwamandla ngeswishi yokuthungela ukuqala imotor bese injini. Kodwa-ke, indlela yokulawula iswitshi yehlukile ngokuya ngemodeli yemoto. Iningi labo lisebenzisa indlela yendabuko yokufaka ukhiye, whi ...
Ungabhekana kanjani nokwehluleka kokhiye wemoto
ngomphathi ku 21-01-07
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, lokho kulungiselelwa okwenziwe ngabantu kusisize ukuthi silondoloze izinkinga eziningi, ezingabonakala kukhiye wemoto okude. Okhiye bemoto bokuqala bafana nezikhiye zethu zendlu. Isicabha semoto sidinga ukuvulwa ngokufaka ukhiye wokukhanda emgodini okhiye ....
ukuthi ukhiye wemoto usebenza kanjani
I-athikili yokuqala: isimiso esisebenzayo se-chip key car Phakathi kwamadivayisi amaningi we-elekthronikhi asemotweni, uhlelo lokhiye oluhlakaniphile lubamba amehlo kakhulu. Ubuchwepheshe bokungena obungenalutho buletha ubuhle obuhle kakhulu, futhi ukuqala kokhiye owodwa kuletha umuzwa ophelele wezobuchwepheshe, kepha kubiza kakhulu ukuguqula ...
Indlela yokulungisa Okwemitha kaTiguan kukhombisa "ukhiye awutholakali"
Imoto ibipake egaraji futhi kungani ingaqali ngakusasa? Kodwa-ke, ngalesi sikhathi ideshibhodi ayibonisi "uhlelo lokulwa nokweba olusetshenzisiwe", kepha "ukhiye awutholakali", ukhiye wesilawuli kude ujwayelekile, kepha akakwazi ukuyithola imoto! Yini inkinga? Ngemuva kokuhlolwa ngokucophelela, ...
Indlela yokususa i-Anti-theft ye-The 4 version, 5 version of Tiguan, Touareg, Q5, GOLF, Magotan
Ukukhanselwa kokulwa nokwebiwa kweVolkswagen ne-Audi 4th no-5 kubandakanye izinhlobo eziningi, ezibandakanya iVolkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Golf 6, Sharan, Audi Q5, A4L, ezinye A6L, njalonjalo. Bangasula i-anti-theft, njengokusebenzisa iBosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X serie ...
Ungenza kanjani uma umnyango ukhiyiwe emotweni?
Izinga lokuphila kwabantu liyathuthuka njalo, ngakho-ke iRhythm yempilo iyashesha. Kulokhu, abanye abantu bazoba budedengu ikakhulukazi, futhi bavame ukushiya izikhwama zabo zemali noma izinto ekhaya lapho bephuma. Akukhathalekile ukuthi ukhohlwe yini lezi zinto ezincane, kepha uma ukhiya ukhiye wemoto ku ...
Ungawutholaphi ukhiye wemoto obuyisela esikhundleni？
Ungakwenza kanjani uma ulahlekelwa ukhiye wemoto? Abanikazi bezimoto abaningi bakhathazekile yilezi zinkinga. Ngesikhathi kulethwa imoto entsha, bekunokhiye ababili. Olahlekile omunye usenokhiye oyisipele, kepha kuthiwani uma ungenza ukhiye oyisipele nawo? Ngemuva kwalokho kufanele uqondanise izinkinobho. Namuhla ngizokutshela ukuthi ungamatanisa kanjani okukude ...
Ukuvela kwezikweletu zebhange eliphakathi: ukubuyekezwa komlando we-onshore nezimpawu zokubuyiselwa kwe-offshore I-People's Bank of China_Sina Finance_Sina.com
Iqembu lezintuthwane selikhona! Okthoba 29! Vula i-akhawunti manje bese ulungele ukuthengwa! [Ngena emotweni ngokushesha ukuze ube ngumnikazi wamasheya futhi ujabulele izinzuzo zokuvula i-akhawunti! Bill Umthethosivivinywa webhange elikhulu uyibhondi yesikhashana ekhishwe yiPeople's Bank yaseChina, ebhaliswe ngamabhange ezentengiselwano ngu ...
Ungakwenza kanjani uma ukulahleka kokhiye wemoto?
Isiteshi sokulungisa oxhumana nabo Lungiselela ukhiye omusha Uma ukhetha ukuhlomisa isiteshi sokukhanda ngokhiye omusha, kuzodingeka unikeze imoto kanye ne-ID yomnikazi. Ngokuya ngamamodeli ahlukahlukene, isiteshi sokulungisa sidinga umnikazi ukuthi ahlinzeke iphasiwedi enamadijithi ayi-17 yokhiye wokumisa. T ...
Ukhiye wemoto unemisebenzi emine efihliwe, ungasindisa izimpilo ngesikhathi esiphuthumayo
Vele uvule isicabha setekisi Iningi lemoto likwazi ukuvula umnyango wecab kuphela uma ucindezela ukhiye werimothi, futhi ngemuva kokuwucindezela kabili, yonke iminyango ingavulwa. Abanye abashayeli bacosha imoto endaweni yokupaka ekude, Uma nje uvula umnyango wekhumbi, bangavimbela abantu ababi ukuba bangene emotweni ...
Ngikunikeze usizo olungcono
Inqubo ye-oda Bhalisa i-akhawunti nge-imeyili yakho - Ngena ngemvume - Faka into ngobuningi enqoleni - Thumela (hlola) - Khetha umthengisi Isevisi yethu 1. Sinikezela ngezinhlobo eziningi zokhiye bemoto, ama-Transponder chips, ama-programm key, amathuluzi we-locksmith , njll. Noma yikuphi ukubuza kuzophendulwa w ...